Realme X2 Pro သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်း Androidsis
Realme X2 Pro သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ၊ နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်းများ
ကျနော်တို့သူ့ကိုအကြောင်းအများကြီးပြောနေတာခဲ့ကြရတယ် Realme X2 Pro ကို မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်းဖြစ်သော်လည်းခန့်မှန်းခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၌အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်၌ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်၎င်း၏မကြာသေးမီကတရားဝင်တင်ပို့ရောင်းချမှုကြောင့်၎င်းသည်ယခုမှ စ၍ ရရှိနိုင်သည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း ကျနော်တို့ကများအတွက်နေအိမ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သော high-end အကြောင်းကိုပြောနေတာနေကြသည် Snapdragon 855 Plus အားယနေ့ခေတ်တွင်စွမ်းအားအရှိဆုံး chipset များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်တွဲဖက်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအခွင့်အရေးအသစ်၌သင်၏နေရာကိုပေးသည်
1 Realme X2 Pro အကြောင်းအရာအားလုံး
1.1 Realme X2 Pro စျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိမည့်ရက်
Realme X2 Pro အကြောင်းအရာအားလုံး
စတင်သူများအတွက်ဤစမတ်ဖုန်းအသစ်သည်a၆.၅ လက်မအရွယ် AMOLED မျက်နှာပြင်နှင့် FullHD + resolution 6.5 x 2,340 pixels နှင့်ရေပုံသဏ္chာန်ထစ်။ ကာကွယ်မှုအတွက် ၄ င်းကို Corning Gorilla Glass5ဖန်သားပြင်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီး 90Hz Refresh Rate ကိုလည်းအသစ်ကလိုပဲထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ 7T Pro ကို OnePlus.
Display သည်အလင်း ၁၀၀၀ အထိကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိပြီး DCI-P1,000 အရောင်အသွေးစုံလင်သည့်အထောက်အပံ့ပါဝင်သည်။ ၎င်းရဲ့အောက်မှာလက်ဗွေစကင်နာတစ်ခုက ၀.၂၃ စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲဖုန်းကိုသော့ဖွင့်နိုင်ကြောင်းကုမ္ပဏီရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်မိုဘိုင်းသည်မျက်နှာပြင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးကို ၉၁.၇% ရှိမည်ဟုကတိပြုသည်။
Realme X2 Pro မှာအစပိုင်းမှာကြည့်ခဲ့တဲ့ Snapdragon 855 Plus ရှိတယ်။ ၂.၉၆ GHz အမြန်နှုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သောဤရှစ် core ပရိုဆက်ဆာသည် Adreno 2.96 GPU အပြင် 640/6/8 GB RAM မှတ်ဉာဏ်နှင့် 12/128 GB သိုလှောင်နိုင်သည့်သိုလှောင်မှုပမာဏနှင့်မတိုးချဲ့နိုင်ပါ။ အပူဖြန့်ဖြူးဘို့, အခိုးအငွေ့အအေးကိုအရည်အအေးပေးတယ်၊ အလွှာစုံကာဗွန်ဖိုင်ဘာအစီအစဉ်၊ အလွှာစုံသောဂရပ်ဖီသတ္တုနှင့်အခြားအပူဓာတ်ဖြန့်ဖြူးသည့်ပစ္စည်းများ၊ ၄၀ မီတာ mAh ဘတ္ထရီ ၅၀ ၀ ပ် SuperVOOC အမြန်အားသွင်းပံ့ပိုးမှုဖြင့်သင့်ကိုအားဖြည့်ပေးသည်။
Android9Pie Operating System ကို Realme အတွက် ColorOS 6.1 ပုံစံဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ကိရိယာအတွင်းရှိ Assistive touch linear motor သည်ဂိမ်းတွင် 4D တုန်ခါမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်.
Realme က X2 Pro ကို ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာမှစွမ်းအား ၄၀% ရမယ်လို့မီးမောင်းထိုးပြသည်။ အလျင်မြန်ဆုံးအားသွင်းနိုင်သည့်နည်းပညာအသစ်ဖြင့်ကိရိယာကို ၃၅ မိနစ်အတွင်းအပြည့်အဝအားသွင်းနိုင်သည်။ စမတ်ဖုန်းသည် USB-PD နှင့် Qualcomm ၏ 35-watt fast charging ကဲ့သို့သောအခြားအားသွင်းနိုင်သည့်နည်းပညာများကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။
Realme X2 Pro တွင်အနောက်ဘက်ပိုင်း၏ဒေါင်လိုက်ကင်မရာ module ရှိသည်။ ဒီအထဲတွင်လေးအာရုံခံကိရိယာများပါဝင်သည်f/ 1 aperture ဖြင့် 64 megapixel Samsung GW1.8 မှန်ဘီလူး13-hybrid zoom ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည့် 20-megapixel telephoto မှန်ဘီလူး၊ 8-megapixel ultra-wide-angle shooter ၁၁၅ ဒီဂရီမြင်ကွင်းနှင့် 115-megapixel depth sensor ။ စမတ်ဖုန်းတွင် super night မြင်ကွင်း၊ EIS၊ ၃၀fps နှုန်းဖြင့် 2K ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုနှင့် 4fps ရှိနှေးကွေးသောဗီဒီယိုများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
Realme X2 Pro Master Edition ဘိလပ်မြေ
Realme X2 Pro Master Edition အနီရောင်သပိတ်မှောက်
Selfie ရိုက်ကူးရန်အတွက် high-end သည် AI စွမ်းအားဖြင့် 16-megapixel သေနတ်သမားကိုတပ်ဆင်ထားပြီး ၄ င်း -၁x pixel fusion နည်းပညာနှင့်အတူညဥ့်နက်သောမြင်ကွင်းကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။
Realme X2 Pro တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆက်သွယ်မှုအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။dual-SIM အထောက်အပံ့၊ 4G VoLTE, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB-C, dual-frequency GPS, NFC နှင့် ၃.၅ မီလီမီတာနားကြပ်အသံ jack ။ Dolby Atmos နှင့် Hi-Res အသံနည်းပညာများပါ ၀ င်သည်။
Realme X2 Pro စျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိမည့်ရက်
Realme X2 Pro ကြိုတင်မှာယူမှုများသည်ယနေ့စတင်ပြီးအောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်တွင်အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးဖုန်းကိုအောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နံနက် ၁၀ နာရီ (တရုတ်ဒေသအချိန်) တွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Moon (အဖြူရောင်) နှင့် Poseidon (အပြာ) များဖြင့်လာသည်။ ကုမ္ပဏီသည်ပထမဆုံးရောင်းချမှုမှ Realme X18 Pro ကိုမှာယူသူများအတွက်ယွမ် ၁၀၀ လျှော့စျေးပေးမည်။ Realme X10 Pro ၏မတူကွဲပြားသောဈေးနှုန်းများမှာ -
6 GB RAM + 64 GB သိုလှောင်မှု (UFS 2.1): ယွမ် ၂၅၉၉ (၃၃၃ ယူရိုသို့မဟုတ် ၃၆၇ ဒေါ်လာ) ။
8 GB RAM + 128 GB သိုလှောင်မှု (UFS 3.0): ယွမ် ၂၅၉၉ (၃၃၃ ယူရိုသို့မဟုတ် ၃၆၇ ဒေါ်လာ) ။
12GB RAM + 256GB Storage Master Edition (USF 3.0) ယွမ် ၂၅၉၉ (၃၃၃ ယူရိုသို့မဟုတ် ၃၆၇ ဒေါ်လာ) ။
El Realme X2 Pro ကို Master Edition ကို၎င်းသည် 12GB RAM နှင့် 256GB ROM ဖြစ်ပြီးဂျပန်ဒီဇိုင်နာ Naoto Fukasawa တီထွင်ခဲ့သောထိုပွဲကိုလည်းပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အရောင်မျိုးစုံနှင့်နောက်ဖက်တွင်ဒီဇိုင်းဆွဲသူပါရှိသည်။ Red Brick နှင့် Cement (မီးခိုးရောင်) သည် Realme X2 Pro Master Edition စမတ်ဖုန်း၏အရောင်နှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုနိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်မှတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ Master Edition ၏ပထမယူနစ် ၁၀၀ ကိုလျှော့စျေးယူရို ၁၀၀ (~ ၁၃ ယူရို (သို့) ၁၄ ဒေါ်လာ) ဖြင့်ရနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Realme X2 Pro သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ၊ နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်းများ
OPPO A11: အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
Google Family Link: အဲဒါဘာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ။